Lejarza, Gistau kunye noPérez-Reverte. Eyona nto intsha ngeSpain | Uncwadi lwangoku
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | I-Biography, Uvavanyo, Ababhali, Iincwadi, Amabali
UDavid Gistau kunye noArturo Pérez-Reverte ngamagama amabini awaziwayo intatheli nababhali Ngaphezulu kobubanzi bendlela. Y UMikel Lejarza, ingcuka, Ngaba yenye yezona abalinganiswa abanomdla, ezigqithileyo kwiintsomi, zamashumi amane eminyaka yokugqibela ye Imbali yaseSpain. Bobathathu baneencwadi ezintsha phantsi kweengalo zabo esele zisesitalatweni. Ngabo bathathu.
1 Ndiyavuma -UMikel Lejarza kunye noFernando Rueda
2 Abantu abashiya - David Gistau
3 Imbali yaseSpain -Arturo Pérez-Reverte
Ndiyavuma -UMikel Lejarza kunye noFernando Rueda
Kutshanje ndive enye Udliwanondlebe lukanomathotholo kuFernando Rueda, intatheli emnike isandla sokuba abhale eyakhe iinkumbulo kuMikel Lejarza, Ingcuka. Uphinde wathetha, ewe, indawo engagungqiyo kunye nesilayidi sokuthula sigcinwe ngenkani yimisebenzi yakhe.
Udliwanondlebe lwalulungile kangangokuba ndaya kule nto Ndiyavuma kwaye ndiyathemba ukuba ndingayifumana kungekudala. Yintoni ebalulekileyo: ubomi bonke okoko ngo-1974 waqala ukusebenza kwi Inkonzo eyimfihlo ukungena ETA kunye negama elithi El Lobo. Kude kube ngoku, xa eqhubeka nokumsebenzela CNI.
Thetha ngayo yonke into ngaphandle kwemilinganiselo yesiqingatha, ngokunyaniseka kwaye ngaphandle kokushiya nantoni na, nokuba yeyona nto imbi kakhulu. Kwaye nam mandithethe Umfazi wakhe, uMamen, ukuzithemba, umhlobo kunye neqabane lakhe kwiminye yemisebenzi yakhe. Unikela umbono wakhe buqu kwezi ziganeko kunye namaxesha ahlala kubudlelwane obuyinkimbinkimbi bomfazi owabelana naye iminyaka engama-40 kunye naye. Iarhente endala yeenkonzo zethu eziyimfihlo.
Abantu abahambayo -UDavid Gistau
KuDavid Gistau Ndiyilandela kumaphepha-ndaba nakunomathotholo, okokuqala kuba uvela kwiklasi yam engama-70, kwaye okwesibini, kuba uyandithanda Ukutyibilika kwentetho yakhe ethethiweyo, ukucinga kwakhe okucacileyo kunye nokuzonwabisa, ngaphandle kwamathambeka kunye nobungqina bokuba ndinqongophele xa ndizityhila ngaphandle kwezitshixo. Nam ndimlandele njengo Umbhali wekholamu en Ihlabathi kwaye emva koko ABC. Ngomnye weentatheli ezingabhala kwaye zithethe naphi na apho uya kuhlala ulandela khona. Bayakugwegweleza, hayi okwephakathi.
Umbhali we Ukubetha okuphantsi, Ingxolo yangasemva o Kuba akukho maqanda, phakathi kwezinye, kule ncwadi intsha ayiqokelelayo amabali Ukuqokelela abalinganiswa abohlukeneyo bahlala kwimida eyahlukeneyo yobomi kunye nexesha elidlulileyo. Bazi yeziganeko ezincinane Oko kuxuba ukukhanya nobumnyama, uburharha nogonyamelo, kwaye kuzisa okungaqhelekanga kokuqhelekileyo kubalinganiswa babo: abasindileyo bentshukumo engazange ime, amatye ngoboya obahlukeneyo, intatheli Ukulala, iithoyi ezaphukileyo zegcisa lomlo kunye nezilwanyana ezisezidolophini ezihamba ngoTshintsho.
Imbali yaseSpain -Arturo Pérez-Reverte
Kwakucacile. Abo bethu abayifundileyo le mbali yaseSpain kule minyaka "Ipatent yekorso", Ikholam kaPérez-Reverte kwifayile ye- XL ngeveki, besiyazi kakuhle. Onke la manqaku anokuphelela koku ukudityaniswa eya kuthengiswa ngomhla we-14. Ekugqibeleni bahlala ngaphakathi Izahluko ezingama-91 kunye ne-epilogue.
Kwaye kuya kuba luvuyo olutsha ukuphinda uzifunde. Ngethoni yakhe imnandi, imuncu, iyakrakra kwaye ayihlekisi. Ukuzithoba, ewe, okanye mandithi ngokwahlukileyo ukuba uMnu. Perez-Reverte kufuneka asixelele izinto.
Le mbali yaseSpain isuka kwimvelaphi iye esiphelweni soTshintsho kwaye uyabona ukuba umbhali wayonwabile ukuyibhala. Uye wangena kwezo ii-nooks kunye ne-crannies ongathandi ukuzibona kangako okanye uzame ukuqonda. Okanye ngokuthe ngqo abafuni ukuqonda ukuba kutheni kuthetha ukucinga nokubonisa. Kwaye ayinguye wonke umntu ozimisele ukuyenza, ngakumbi eyona nto ibambekayo kunye neyoqobo.
Kodwa ngu ukufundwa okufanelekileyo kwabo bethu bazinikeleyo Umbhali, ngakumbi kwicandelo lakhe lomlobi, wezeMbali ngokubanzi kwaye angabi maninzi amalaphu ashushu. Kwaye kukuba kwimihlathi enje, into yakhe kukuyifunda ewe okanye ewe:
Ukusuka kwiSahluko XII: «Esinye sezi zizwe yayileso seAlmohads, abantu abaneempumlo ezilukhuni, ababhengeza iJihad, imfazwe engcwele -igama livakala kubo ngokufanayo-, bahlasela emazantsi e-Ispaniya endala kwaye banika uKumkani u-Alfonso VIII wase-Castile -enye kanye ubukumkani babusahlulwe phakathi koonyana, ukuze bangaphulukani nesiko, uLeon noCastile babesahlule-ukubethwa kutata kunye nenkosi yam endiyithandayo kwidabi lase-Alarcos, apho u-Alfonso olihlwempu wayenxibe umthendeleko wokuqala ».
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Iincwadi » Lejarza, Gistau kunye noPérez-Reverte. Entsha malunga neSpain